Qiimayn Lagu Sameeyay 14-kii Ciyaartoy Ee Uu Jurgen Klopp Keenay Liverpool Iyo Xidigaha Ugu Liita Oo La Ogaaday. - Gool24.Net
Qiimayn Lagu Sameeyay 14-kii Ciyaartoy Ee Uu Jurgen Klopp Keenay Liverpool Iyo Xidigaha Ugu Liita Oo La Ogaaday.
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa muddo kooban gabi ahaanba ku badalay sidii ay xaalada Liverpool ahayd in ka badan rubuc qarni kadib markii uu kooxda isbadal dhinaca ciyaartoyda iyo falsamada ciyaaraha ah uu ka sameeyay.
Intii uu Jurgen Klopp joogay Liverpool waxaa jiray dhaq dhaqaaq badan oo ay kooxdu ka samaysay dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxayna iskugu jiraan ciyaartoy kooxda ka baxay iyo kuwo badan oo uu keenay.
Ilaa hadda ma jiro hal ciyaartoy oo uu Jurgen Klopp ka fasaxay Liverpool oo ay kooxdu tabtay ama muujiyay in uu u qalmay in uu Anfield sii joogo, waxayna taasi muujinaysaa sida uu macalinka reer Germany u darsay xaalad kasta oo uu kooxdiisa ciyaartoy kaga baxay.
Laakiin waxa uu Klopp magac wayn ku sii helay nooca ciyaartoydii uu la soo saxiixday in kasta oo ayna dhamaantood noqon sidii uu ka doonayay.
Haddaba qiimayn lagu sameeyay dhamaan 14kii ciyaartoy ee uu Klopp kula soo saxiixday kooxdiisa Liverpool ayaa muujinaysa sida uu nasiib wayn ugu lahaa in wax walba ay u fiicnaayeen marka laga reebo dhawr saxiix oo uu ka waayay wixii uu ka doonayay.
Qiimaynta ugu saraysa ee ciyaartoydan la siinayay ayaa ah 10/10 ka ugu fiican halka kuwa kale ay helayeen tobankiiba inta ay fiicnaayeen halka xidigo badani ay noqdeen kuwo si wayn uga fiicnaaday xataa sidii markii hore laga filayay.
Shan ciyaartoy oo uu Klopp keenay Liverpool ayaa helay qiimaynta ugu saraysa oo ah min 10/10 waxayna kala yihiin, Sadio Mane, Van Dijk, Alisson Becker, Mohamed Salah iyo Andy Robertson.
Saddexda ciyaartoy ee ku soo qiimayn xiga ayaa noqday Fabinho, Matip iyo Wijnaldum kuwaas oo helay qiimayn min 9/10 ah.
Laakiin xidiga ugu liita ee uu Jurgen Klopp kula soo saxiixday Liverpool ayaa ah goolhaye Loris Karius kaas oo lagu xusuusto sidii uu Liverpool murugada ugu badaday finalkii Champions League ee 2018 kii kaas oo waayihiisii Liverpool soo gaba gabeeyay.
Goolhaye Adrian oo uu Klopp si xor ah kula soo wareegay ayaa isna noqday mid qiimayn hoose helay waxayna xaaladiisu sii xumaatay markii uu isna Liverpool sabab ugu noqday in ay Champions League kaga soo hadheen guuldarooyinkii Atletico Madrid.
Ragnar Klavan oo uu Klopp qiimo aad u hooseeya ku keenay Anfield isla markaana uu muddo kaga soo gudbay waqtiyo adag ayaa isna qiimayn fiican helay.
Oxlade-Chamberlain iyo Xherdan Shaqiri ayaa iyaguna qiimayn fiican haysta inkasta oo ayna xidigaha hore ee guulaystay la mid ahayn laakiin Naby Keita ayaa qiimayn hoose helay kadib dhaawacyo badan oo u diiday in uu awoodiisa wada muujiyo.
Haddaba halkan kaga bogo qiimaynta ciyaartoydii uu Jurgen Klopp kula soo saxiixday Liverpool muddadii uu Anfield maamulayay.
Joel Matip 9/10
Loris Karius 2/10
Ragnar Klavan 8/10
Gini Wijnaldum 9/10
Mohamed Salah 10/10
Andy Robertson 10/10
Naby Keita 6/10
Haddaba akhriste, haddii aad taageere Liverpool ah tahay, miyuu jiraa xidig aad qiimayntiisa u aragto in uu ka hooseeyo heerkii aad ka filaysay ama uu ka sareeyo heerkii aad u arkaysay?
Abdullahi salat says:
Naby kaita ayaa qiima ahaan ila hooseeya waayo waxan kafilayey qiimo intaan kabadan
Naby kaita ayaa qiime ahaan igala sareeya shaqiri